Ukuthengiswa Kwezimoto Ezintsha Ezisetshenzisiwe neMulti-brand Km0 - 4G Auto Catania
Ukuthengiswa Kwezimoto Ezintsha Ezisetshenzisiwe neMulti-brand Km0 - 4G Auto
I-4G Auto unikeza Catania isicebi I-Fleet yezimoto ezinemikhiqizo emisha eminingi futhi esetshenzisiwe kanye Km0. Izinhlobo eziningi ze izimoto yazo zonke izinhlobo zezimoto ezidume kakhulu nezaziswayo, kufaka phakathi i- izimoto zokuthengisa.
I-4G Auto: Ipaki enkulu kunazo zonke yemoto eminingi eCatania
Le imoto zingaphezulu kakhulu kwezinto zokuhamba: zingabalingani a Amasondo amane ezisisekela ezindleleni zansuku zonke zempilo yethu. Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukwazi ukuthi ungayikhetha kanjani imodeli ye- imoto lokho kuhlangabezana kangcono nezidingo zethu kanye nezifiso. Ku- Ukuthengisa okuzenzakalelayo kwe-4G di Catania, uzothola enkulu Izimoto eziningi kuyo yonke imikhiqizo edume kakhulu neyaziswayo ukuqinisekisa ukuthi bonke abashayeli bayimodeli efaneleke kakhulu. Izimoto ezintsha, kusetshenzisiwe kanye Km0 di abakhiqizi bezimoto njenge-Fiat, Lancia, Abarth, Jeep, Alfa Romeo nezinye eziningi zikhethwe ngokucophelela lapha. I- Izimoto Ezintsha Nezisetshenzisiwe Ezintsha okuthengiswa ku-4G eCatania kubonakala ngamandla, ukuthembeka nokuphepha. Okuhlangenwe nakho okude kweminyaka engaphezu kwengu-20 ku Umkhakha wezimoto ivumela UMassimo Pastanella e Ngaphandle kweRapisarda ukukhombisa konke ukuthanda kwabo nokuzinikela kwabo ku- Amasondo amane agli abashayeli ngifuna entsha imoto, kuqinisekisa ikhwalithi nokwenza imikhiqizo.
Izimoto ezintsha, izimoto zenkampani kanye nezentengiselwano: I-4G ihlala inezindlela ezifanele zokuhamba zakho
La Umthengisi we-4G angaziqhayisa nge Ipaki yezimoto wobubanzi obukhulu obubekayo izimoto yayo yonke imikhiqizo etholakala kubo bonke abashayeli ngifuna imoto entsha. Isikhungo siqinisekisa ubuchwepheshe obuhle kuwo wonke amamodeli nokuhlanganiswa okukhulu kwe Auto ivuselelwa njalo ngamamodeli asebenza njalo futhi asebenza kahle. Ngale ndlela, singahlala sikuqinisekisa okungcono kakhulu amamodeli wezimoto. I-4G Auto kuyinto elidayisa ukuthi unikezela eziningi ukunakekelwa kanye ukunakwa ekukhetheni izimoto okunikelwe ukuthengiswa. Isiphakamiso sezimoto, empeleni, sibonakala ngezindinganiso ezisezingeni eliphakeme ezamukelwe ekuhloleni ngayinye Imakethe yezimoto. Kunezici eziningi ezihloliwe ukuqinisekisa ukuthi uyimoto enezici zobuhle nezisebenzayo ezingenasici.
Noma ngubani odinga ukuthenga imoto ehlonipha ukusebenza nokusebenza, uyazi ngokuqiniseka ukuthi Ukuthengisa izinto ngenkani iziqinisekiso kuphela izimoto ezisebenzayo, inokwethenjelwa, iqinisekisiwe futhi isesimweni esihle kakhulu. Izinsizakalo eziningi ziyatholakala njengezimali, ukuqashwa kwezimoto isikhathi eside, umthwalo, ukuqoqwa kokushintshaniswa, ukuthengiswa kwezithuthuthu. Ngenxa yokutholakala, izinsizakalo ezinembile nobuchwepheshe obukhulu, ulwazi lokuthenga izimoto lapha alunakuqhathaniswa.
Ikheli: Nge-Gorizia (Isikhungo Sokubonisa), i-66
I-POSTAL CODE: 95126
Umakhala ekhukhwini: 340 3153454
Ifasitela lesitolo: www., canile.it
Inombolo ye-VAT: 05339530874